« Crème » fanosotra @vatana, manala vakivaky @volo | Univers féminin et de la Mode à Madagascar
Mbola lamaodin’ny tanora foana ny manalava volo. Indraindray, efa tena simba sy vakivaky tokony ho tapahana ilay izy, nefa dia entina eny ihany tsy foy.
Soa fa azo tsaboina tsara izany, na amin’ny akora natoraly, na amin’ny akora voahodina. Anao ny safidy !
Menaka oliva sy kinana
Afangaro ny menaka oliva sy ny menaka kinana. Vontosana amin’io fangaro io ny volo mbola maloto ary avela hilona eo mandritra ny ora 3 fara-fahakeliny. Hosorana azy avokoa manomboka any amin’ny foto-bolo hatrany amin’ny tahom- bolo ary somary arahana otra kely. Raha ka karazam-bolo be menaka kosa dia tsy orina sady 10 mn ihany no lomana dia sasana amin’ny “shampooing” mahazatra. Tsara kosa raha atsahatra ny fanaovana volo amin’ny “fer à lisser” na “brushing” rehefa manaraka ity fitsaboana ity. Averina in-droa isa-kerinandro raha te hahazo vokatra ao anatin’ny 3 herinandro.
“Crème coiffante” na “crème” fanosotra amin’ny vatana
Raha akora any amin’ny ivon-toerana fanaovana volo na vidiana eny an-tsena indray no safidiana dia ny “shampooing anti-casse” no manarina ny vakivaky amin’ny volo. Azo atao, amin’izay fotoana izany ny manao vol,o fa tokony mampiasa “crème coiffante” kosa na ireny “crème” fanosotra amin’ny vatana ireny, mba hitsaboana hatrany ny volo. Ny habetsak’ilay menaka ahosotra dia atao mifanaraka amin’ny tahan’ny menaka amin’ny volon’ny tsirairay. Raha maina izany ilay volo dia atao betsabetsaka, raha be menaka kosa dia atao zara fa misy.
Tsy dia mety amin’ny volo, amin’izao vanim-potoanan’ny ririnina izao, ny manasarakorako azy, fa aleo ihany izy fatorana. Manimba azy mantsy ilay hatsiaka be iny. Fihogo makaka nify kosa no ampiasaina, rehefa mibango azy, na vakivaky izy na tsia.